गाजर संग माइक्रोवेव कलियों | भान्सा व्यंजनहरु
मारिया vazquez | 29/05/2021 10:00 | चिसो शुरुआत
के तपाईंलाई सम्झना छ? माइक्रोवेव गाजर भर्खरै तयारी गर्न हामीले के सिकायौं? आज हामी यसलाई फेरि तयार गर्नका लागि प्रयोग गर्नेछौं प्रकाश र स्फूर्तिदायी स्टार्टर: गाजर संग माइक्रोवेव कलियों। एक साधारण डिश जसमा हामी हाम्रो क्लासिक गाजरलाई अर्को घुमाउनेछौं।
सलाद बर्षको यस समयमा उत्तम सुरुवात हुन्छ। तातो हिट हुँदा, अरूसँग मिलेर केही कोपिला र केही हरियो पातहरूको ताजापन जस्तो केहि छैन। फलफूल र सब्जिहरु खाना सुरु गर्न। यस अवस्थामा, सामग्रीहरूको सूची सरल हुन सक्दैन: कलियों, गाजर, टमाटर, चाइभ्स र किसमिस।
आठ मिनेट भन्दा बढि यसले लिन्छ गाजरलाई माइक्रोवेभमा तयार गर्नुहोस्। मिनेटहरू जुन तपाईं लाभ लिन सक्नुहुनेछ, मैले गरे जस्तै, अन्य सामग्रीहरू र ड्रेसिंग तयार गर्न। तपाईलाई सब भन्दा मन पराउनुहुनेलाई छनौट गर्नुहोस्; मैले भर्खरै नुन, काली मिर्च, र अतिरिक्त कुंवारी जैतूनको तेल जोडें। के तपाईं यसलाई तयार पार्ने आँट गर्नुहुन्छ?
यी माइक्रोवेव गाजर कलहरू एक स्टार्टर, प्रकाश र ताजा दिनहरूको सामना गर्नको लागि स्फूर्तिदायीको रूपमा उत्तम छन्।
कुल समय: 15 m
२ ठुलो गाजर
माखन को एक घुंडी
हामी गाजर पील गर्दछौं र तिनीहरूलाई आधा मा काट्छौं, दुबै लम्बाई र चौडाइमा। पछि हामी प्रत्येक स्टिकलाई दुई भाग गर्दछौं लम्बाई दिईन्छ ताकि तिनीहरूले पकाउन कम समय लिन्छन्।
हामी तिनीहरूलाई गहिरो प्लेट वा टुपरमा राख्छौं र हामी पानी थप्छौं ताकि यसले प्लेट वा टुपरको पूरै आधार कभर गर्दछ। मेरो मामलामा, पानीको औंला। पछि, हामी गाजरलाई मौसममा राख्छौं र कन्टेनरलाई प्लास्टिकको र्यापले कभर गरेर माइक्रोवेभमा लैजान्छौं।
हामी अधिकतम शक्ति मा पकाउँछौं 5-6 मिनेटको लागि वा गाजर कोमल नभएसम्म
जबकि हामी लाभ लिन सक्छौं दुई मध्ये कली खोल्नुहोस्, टमाटर पासा र chives काट्नुहोस्। हामी यी अन्तिम दुई मिक्स गर्छौं र मिश्रणलाई कलियहरूमा वा जहाँ तपाईं चाहानुहुन्छ ठाउँमा राख्छौं।
एक पटक गाजरको स्टिकहरू कोमल भएपछि, हामी त्यसलाई फुकाल्नेछौं, उनीहरूमा माखन राख्नुहोस् र ग्रिल प्रकार्यसँग एक मिनेट पकाउनुहोस्।
हामी सलादमा थप्छौं दुबै गाजर लाठी र किशमिश।
हामी नुन र मरिच समाप्त गर्न र जैतुनको तेलले पानी माइक्रोवेभमा गाजरको साथ कलियों।
लेखको पूर्ण मार्ग: मुख्य पृष्ठ » साथीहरू » चिसो शुरुआत » माइक्रोवेभ गाजर कलियों
बेक गरिएको ट्यूना भरिपूर्ण aubergines